MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA TARANKA BULL DOG SHORTY - EEYAHA
Qaangaarka, labka Gaaban ee labka ah, sawirka waxaa iska leh Precious Jems Kennel
Shorty Bull waa bulldog is haysta oo muruq ah oo dhererkiisu yar yahay. Madaxa waa wareegsan yahay astaamaha bulldog ee caadiga ah. Indhaha waa la kala fogyahay mana haboona inay soo baxaan. Daanka waa inuu qalooca, ee uusan toosanayn. Sanka waa in yar loo rogaa oo laga yaabaa in uu yahay madow ama beerka midab leh. Sanka Dudley waa cilad la isku qurxiyo. Waa inuu leeyahay qaniinyo shaashad hoosaad ah, laakiin aan si xad-dhaaf ah hoos loo gaarin. Indhuhu waxay noqon karaan midab kasta, in kasta oo bunni yahay midabka indhaha la doorbido. Dhegaha ayaa la jaray ama hoos loo dhigay. Rose ama dhegaha kacsan waxaa loo arkaa qalad. Jidhku waa inuu ka gaabiyo gadaasha qoorta ilaa dabada. Laabku waa inuu ahaado mid ballaaran oo dherer ah oo leh qoto dheer oo gaaraya xusulka. Muuqaal is haysta waa la doonayaa. Ballaca afaafka hore iyo gadaasha dambe waa inay ahaato mid isu dhigma, oo aan wax lagu amaahin gadaal cidhiidhi ah, xabadka ayaa laga yaabaa inuu ka ballaadhan yahay kan dambe. Xaga dambe ee aadka u cidhiidhiga ah ayaa loo arkaa qalad. Garbaha iyo garabka waa inay ahaadaan kuwo si fiican u wareegsan oo si wanaagsan isu muruqsan, oo amaahinaya muuqaal xoog leh. Waxa laga yaabaa in waxoogaa kor u kaco sinaha. Lugaha waa lafdhabar culus oo saamiga tooska ah ee jirka. Lugaha dhaadheer ee u dhigma jirka ama lafaha wanaagsan waa cilad. Lo’da xiran ama qoolleyda la tolay waa cilad. Eeygu waa inuu lahaadaa cago adag iyo balastar toosan. Cagaha lugaha la iska siiyaa waa qalad. Dabada ayaa gaaban, ama ku soo xirtay ama ku xirtay. Dhammaan midabada jaakadda waa la aqbalay marka laga reebo meeriska ama madow iyo tan.
pitbull oo lagu qasay cidhib buluug ah
Shorty Bull waa eey dabeecad wanaagsan, xitaa dabacsan, eey deggan. Noocani wuxuu ubaahanyahay hogaan mana ku liibaani doono la'aantood. Markay dareento an milkiiluhu waa mid jilicsan ama jilicsan xaggeeda, waxay u noqon doontaa si caddaalad ah ula kac ah. Eeyadan ayaa sida ugu fiican ugu jawaaba milkiilaha deggan oo deggan, laakiin adag, joogto ah oo dulqaad badan. Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay Sameeya wehel weyn oo diyaar u ah oo diyaar u ah inuu shaqeeyo.
Dhererka: 15 inji (38 cm) iyo ka hoose.
Miisaanka: 40 rodol (18 kg) iyo ka yar.
doberman pincher iyo isku darka adhijirro Jarmal ah
Shorty Bull wuxuu sifiican ugu noolaadaa gudaha gudaha qoyskiisa.
Shorty Bull waa ka dhaqso iyo jimicsi badan yahay Ingiriis Bulldog. Waxay u baahan tahay in loo qaado socod dheer maalinle ah halka ay ku taal ciribta dhinac ama gadaasha qofka haya hogaanka , sida maskaxda eeyga oo kale hogaamiyaha ayaa hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Qiyaastii 3-5 eey
Aad u yar ayaa loo baahan yahay. Burushka joogtada ah ayaa sameyn doona. Noocani waa celcelis daadiya.
feeryahan isku qasan dane weyn
Aasaasayaashii 'Shorty Bull' waa Jamie Sweet iyo Amy Krogman. Shorty Bull waa khad cusub oo bulldogs ah oo lagu dhajiyay cabbirka yar-yar. Si ka duwan noocyo badan oo kale oo cagajugleyn ah oo cabir ahaan hoos loo dhigay, Shorty Bulldog kuma jiraan Boston Terrier ama Pug oo safkeeda ku jira. Eeyadan waxaa loo soocey karti ahaan shaqadooda iyo astaamaha jir ahaaneed ee kuma eka oo keliya muuqaalka.
ABKC = Naadiga Dulmiga Mareykanka ee Bully
BBCR = Diiwaanka Isbahaysiga Bully Breed
Qaangaarka, dheddigga Gaaban, sawirka waxaa iska leh Precious Jems Kennel
cabirka isku darka colley buluugga heeler
Shorty Bull pup oo jira 6 bilood, sawir qadarin leh Precious Jems Kennel
chihuahua rat terrier isku qas eeyo yaryar oo iib ah
Boston Pit qasan beagle
xiisaha of muqisho bulldogs Maraykanka
Olde bulldogge Ingiriisi isku darka bulldog ingiriisiga